10 Battery Optimizer gam akporo na iOS Devices
Na a nke oge a afọ, owning ihe Android ma ọ bụ iPhone bụghị a nnukwu ndibiat. Ma ịnọgide na-enwe ha batrị etoju abụwo mgbe nile a nsogbu. The ụbọchị mgbe mobile igwe na otu ụgwọ nwere ike-adịgide adịgide maka a izu na-arahụ na nke a oge nke nkà na ụzụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị na-eme mkpesa banyere Okwu ndị metụtara batrị uzo ma nọgide na-arịọ ya mere manufactures adịghị ịgbatị arụmọrụ nke ha ndụ batrị, DỊTỤLA mgbe ị jụrụ onwe gị otú oru oma na ị nọ na-eji gị ama ma ọ bụ iPad ngwaọrụ? Ị eleghị anya sị mba.
Gịnị mere My Emmanuel / Iphone / Android batrị ekwentị Nwụrụ Fast?
Taa Smartphone na oge a na ngwaọrụ ndị dị ka n'akpa uwe-sized kọmputa na-eme ka i na-enwe ụfọdụ atụmatụ na ngwa. Otú ọ dị, batrị oge nke ndị a na ngwaọrụ nwere ma na-ịchụkwudo ebe elu oriri batrị na-eji maka atụmatụ ndị a na ngwa. E nwere ọtụtụ ihe mere gị batrị nwụrụ ngwa ngwa. Nke mbụ niile, i nwere ike meghere ọtụtụ ngwa, dị ka Skype, ozi, Kik App, Viber, na ọtụtụ ndị ọzọ. Nke abụọ, i nwere ike agbanwuru gị GPS nsuso, Wi-Fi na Bluetooth. Nke atọ, i nwere ike ebubo batrị gị mgbe ya n'ụzọ zuru ezu discharges ike ya. Anọ, i nwere ike chefuo Lower gị na ihuenyo ihie ya. Ndị a ngwa ọdịnala na atụmatụ na-erepịaghị batrị gị ike.
Maara Top 5 Battery Optimizer N'ihi Android:
Ị maara Android ndụ batrị anaghị adịru mgbe ebighị ebi, ma ekele na mmepe ndị chọtara ụzọ ka mma na ịgbatị ndụ nke gị Android batrị site iche iche iche iche nke batrị optimizers.
# 1: Linpus Battery nchekwa
Nke a bụ a n'ụzọ zuru ezu na-apụta batrị njikarịcha na management ngwá ọrụ. Ọ na-agwa gị kpọmkwem oge i nwere ike iji ngwa gị tupu batrị ga-drained. Ọ investigates gị usoro iji ezitekwara ọmụma na ngwa na ọrụ na-ewe ọtụtụ n'ime gị batrị.
Ọ boosts gị dị ndụ batrị site n'inye ọmụma na wijetị / ngwa ọdịnala na ị iwesa kasị.
Ọ nachi kasị iwesa ngwa ọdịnala site na kasị dị irè.
Ọ na-atụ aro management ma ọ bụ ike ịzọpụta atụmatụ na mbo mbuli gị ndụ batrị.
Ọ na-egosi ọganihu na ọnọdụ gị batrị oge niile.
Ọ na-adịghị aha a zuru ụgwọ na akụkọ ihe mere eme
Ọ disrupts activites ruru ya ịchịkwa usoro
# 2: NQ Easy Battery nchekwa
Nke a bụ eleghị anya ndị kasị okike batrị optimizer maka Android n'ihi na ị na mkpa a n'ụlọ ihuenyo maka batrị njikarịcha.
Ọ bụ nnọọ adaba ngwa n'ihi na e mere ya dị na Ihuenyo naanị
Ị nwere ike inyocha niile na-agba ọsọ ngwa
Ị nwere ike na-adịgide adịgide igbachi na ngwa ọdịnala ị chọrọ ịgba ọsọ mgbe niile
Akụkọ na ugbu a batrị larịị
Gburu-agba ọsọ ndabere Filiks
Ọ na-adịghị gwa Mgbe batrị bụ n'okpuru 20 percent
Ọ na-ewe oge Ibu Ibu
Nke a awade ọtụtụ atụmatụ ọ na-eri. Ị na-enwe na-ebuli batrị site na otu-mgbata ike ịzọpụta na-agbanwe ntọala na akpaghị aka. N'ikpeazụ, ị ga--amara gị ọkwa na ọ bụrụ na batrị esịmde n'okpuru 20%.
Ọ na-egosi ezi batrị pasent
Gbatịrị ndụ batrị
Ọ nwere inbuilt egbu egbu na chupu ngwa ọdịnala nke na-erepịakwa ndị kasị nke ike gị
Mma ịrụ ọrụ batrị na-enwekwu ngwaọrụ ọsọ
Ị na-adịghị amara gị ọkwa mgbe ọ n'afọ ofufo rụchara na ngwa ọdịnala
Ọ bụ ihe na Android arụmọrụ na nche njikarịcha ngwa na-enye atụmatụ na ndị dị mfe maka batrị.
Rụrụ ezigbo oge virus enyocha kwa
Ọ nwere Game Speeder ẹkedori egwuregwu
Nkwado egwuregwu site na-agba ọsọ ya were were na-enweghị disruptions
Ndụ batrị na arụmọrụ na-adịghị kwesiri ngosi
Adịghị gwa Mgbe batrị bụ n'okpuru 20 percent.
# 5: Easy Battery nchekwa
Nke a bụ ihe Android ngwa na e mere na-ịgbatị ndụ nke gị batrị. E nwere ihe anọ nhọrọ maka nke a ụdị: Advanced ahaziri ọnọdụ, Super Ike Azọpụta ọnọdụ, nkịtị mode na General Azọpụta ọnọdụ.
Mfe iji rụọ ọrụ na ọrụ enyi na enyi
Nnọọ mgbanwe dị ka ọ na-enye anọ na ụdị nhọrọ
Gbatịrị ndụ batrị rụọ ọrụ nke ọma
The Top 5 batrị optimizer maka iPad / iPhone
Ọ bụrụ na Android ndụ batrị adịghị adịru mgbe ebighị ebi, iPad na iPhone bụghị isịneke ka na-achị. Dabara nke ọma, ị ka nwere ike ịgbatị ya ndụ batrị n'elu iji site ise a kasị mma ngwa.
Nke a bụ a n'ụzọ zuru ezu na-apụta ngwaahịa na-enye zuru ezu ọmụma gị batrị. Na nke a ngwa, emecha a zuru okirikiri ụgwọ ga-aka mfe.
Nanị App akwado Full Cycle Charge
Ọ bụ ihe kasị ezi batrị ngwa
Ọ na-adịghị ego maka omume na-agba ọsọ na-agwụ ekwentị
Ọ na-adịghị Gbanwee Ntọala na ga-ebuli ndụ batrị n'ihi na ị
Ọ na-adịghị na-egosi na a ụgwọ ka dechara
Nke a bụ nnoo a nnọọ uru na ngwá ọrụ gị iPhone na iPad ngwaọrụ, dị ka ọ bụ ọzọ ndị ọkachamara. Ọ na-echebe ma na-ekwusi gị batrị.
Ọ na-echebe batrị n'ụzọ dị irè
Ọ nwere enyi na enyi usoro ime ọnọdụ
Ọ na-enye ọtụtụ ngwá ọrụ na Atụmatụ aka chekwaa ndụ batrị.
Na-arịọ gị ka ihichapụ nwere ma ọ bụ na-agba mbọ iji wepụ junk
# 3: SYS Arụ Ọrụ Manager
Nke a bụ ngwa e mere iji nyochaa ebe nchekwa, diski, Filiks, Battery, Network, Performance na ngwaọrụ stat niile gị na iDevices.
Na-enye mfe na-enye aka Atụmatụ na otú ịzọpụta gị batrị
Na-enye atụmatụ nke free ịba uru
Ọ na-agwa gị njikọ Ịntanetị ọsọ
Adịghị enye bọtịnụ doro anya na ebe nchekwa
Ọ dịghị ebe nchekwa button gosiri na meziri
Ọ bụ ngwá ọrụ na-egosi na ugbu a batrị larịị nke iOS ngwaọrụ site a mmanya egosi na a pasent mmepụta. Ọ na-atụle na-kasị pụrụ ịdabere na batrị ngwa.
Ọ na-egosiputa batrị ụgwọ larịị ke percent
Ọ nwere oké Maintenance atụmatụ
Ọ na-enye zuru ezu nkọwa: fọdụrụ ụgwọ oge na alerts mgbe ọ bụ kpam kpam ebubo
Nke a bụ ihe niile na-oge na ngwa na-enye gị niile zoro ezo ọmụma. N'ihi ya, nlekota gị dum arụmọrụ nke ngwaọrụ gị.
Ngwa dị mfe melite na-eji
Bara uru na nsuso iOS 5
Na-enye bara uru Atụmatụ maka batrị njikarịcha
Data atụmatụ na-ewe oge Ibu Ibu
5 Solutions iji Hichapụ Photos si iOS 7 Devices
Best iOS Photo Manager jikwaa Photos on iOS Devices
Olee otú naghachi iPhone Data Lost Ruru iOS 6 Jailbreak
> Resource> iOS> 10 Battery Optimizer gam akporo na iOS Devices